China GMP FDA Fluidized-bed Jet Mill ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Qiangdi
Igwe ihe nkpuchi Jet Fluidized-bed bụ n'ezie ngwaọrụ dị otú ahụ nke na-eji ikuku dị elu na-agba ọsọ iji mee ụdị akụrụngwa akọrọ. N'ịbụ nke ikuku na-agbakọ, a na-eme ka ihe onwunwe dị ngwa gaa na-agafe nke anọ nozzles ka a ga-emetụta ma gwerie ya site na ikuku na-asọ asọ na mpaghara igwe
Ngwongwo ihe nkpu osisi Jet- n'okpuru omume nke ike ikuku nke ọkpọkọ ọkpọ na ọkpọka nke onye na-agba agba, ihe na-abata na bed-bed n'ime igwe ugboelu. na-enweta ntụ ntụ dị iche iche.
Ngwaahịa a bụ bedized pulverizer na mkpakọ ikuku dị ka ndinuak ọkara. E kewara igwe ihe na ngalaba 3, ya bụ ebe ndinuak, ebe nnyefe na ebe grading. A na-enye Mpaghara Grading na wiilị grading, na ọsọ nwere ike gbanwee site na ntụgharị. The ndinuak ụlọ mejupụtara ndinuak nozulu, feeder, wdg The mgbanaka sir ọkọnọ diski n'èzí ndinuak tragaasi jikọọ na ndinuak nozulu
Ihe a na-abanye n'ime ụlọ na-akụpịa ihe site na feeder ihe. Mkpakọ ikuku nozzles n'ime ndinuak ụlọ na nnukwu ọsọ site n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ anọ ndinuak nozzles. Ihe enweta osooso na ultrasonic jetting eruba na ugboro ugboro mmetụta na ikukota na Central converging ebe nke ndinuak ụlọ ruo mgbe ọ na-echi ọnụ n'ala. Ihe na-etipịa agbawa na-abanye n'ime ụlọ nhazi na njupụta. Ebe ọ bụ na wiilị grading na-agba ọsọ na oke ọsọ, mgbe ihe ahụ na-arịgo, ihe ndị ahụ dị n'okpuru ike centrifugal nke sitere na rotors grading yana ikike centripetal nke sitere na viscosity nke ikuku. Mgbe irighiri ihe di n'okpuru ike nke centrifugal kariri ike nke centripetal, irighiri ahihia nke nwere otutu dayameta karia ihe ntaneti a choro agaghi abanye n'ime ime nke wheel grading ma laghachi na imebi ihe. Ihe ndị dị mma nke kwekọrọ na dayameta nke ihe ndị a chọrọ iji nweta ihe ga-abanye na wiilị na-asọba ma na-abanye n'ime nkewa nke cyclone nke ime ụlọ nke wheel wheel na ikuku na-anakọta site na onye nchịkọta. A tọhapụrụ ikuku site na ikuku intaker mgbe edozi akpa ọgwụgwọ.
1. Ihe ahụ nwere ike iru 0.5-10 micron maka oke ikuku ikuku dị elu na ike dị egwu dị egwu.
2. Classification ngwaọrụ dị n'ime pulverizer, site na nke keadighi rarii ahụ si nhazi ihe nwere ike cyclically bibiri na-emepụta okokụre ngwaahịa na edo ọka fineness na obere nso nke urughuru diameters.
3.Product imewe, ihe onwunwe nhọrọ kpamkpam dị na GMP / FDA ọkọlọtọ requirements.No mmetọ ihe na-egwe ọka usoro.
4.The airflow dị nnọọ ọcha na nzacha usoro. Kọmpat esịtidem Ọdịdị ịrụ mechie circuit egwe ọka. Site akụrụngwa na-aga n'ihu mmepụta nke okokụre ngwaahịa, pulverization achọ nnọọ obere oge ma na-amị elu arụmọrụ na-aga n'ihu ọrụ.
5.The ngwá Ọdịdị dị mfe, n'ime na elu ukwuu-egbu maramara ， dịghị nwụrụ anwụ n'akuku, mfe ọcha.
6.Low eyi: N'ihi na ndinuak mmetụta a kpatara mmetụta na nkukota nke ahụ, elu-ọsọ ahụ na-adịkarị kụrụ mgbidi. Ọ metụtara na ịzọpịa ihe n'okpuru Moh si n'ọtụtụ 9.
7.Nyocha ụlọ ọrụ ndị dị mkpa na asambodo, dị ka FAT.SAT.DQ.OQ.IQ.PQ.
Nkọwa zuru oke maka ụkpụrụ GMP / FDA
1.Loading na-ekpochi ihe mechie mkpuchi iji zere ngwaahịa ndị e metọrọ emetọ.
2.All motors na okpu ka echedo ya ma debe ngwaahịa di ocha. Ọkachamara ọkachamara.
3.All igwe ihe kọntaktị na ngwaahịa ga-igwe anaghị agba nchara, ọ dịghị nwụrụ anwụ n'akuku na-enweghị mmetọ.
Pneumatic pulverizer emi esịnede nke ikuku Compressor, mmanụ remorer, gas tank, ifriizi draya, ikuku nyo, fluidized bed pneumatic pulverizer, cyclone separator, mkpoko, ikuku intaker na ndị ọzọ.
Usoro a na - ejide njikwa ihuenyo mmetụ ọgụgụ isi, ọrụ dị mfe na njikwa ziri ezi. Nke a na usoro adopts elu PLC + ihuenyo mmetụ akara mode, na ihuenyo mmetụ bụ ọrụ ọnụ nke usoro ihe a, N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa. Ka n'ụzọ ziri ezi ịghọta igodo niile 'ọrụ na ihuenyo mmetụ iji hụ na ezi ọrụ nke usoro ihe a.
Ihe na Ngwa
→MEFENAMIC ACID akụrụngwa sitere na ala 60Mesh ka ọ bụrụ D90 <5.56um
→ECONAZOLE NITRATE akụrụngwa sitere na ala 60Mesh ka ọ bụrụ D90 <6um
Ntụ ntụ nri
→MANGO POWDER akụrụngwa sitere na 70Mesh ground iji bụrụ D90 <10um (adabara okpomọkụ mmetụta ọsọ ọsọ nri.)
→Tii ntụ ntụ akụrụngwa sitere na ala 50Mesh ka ọ bụrụ D90 <10um
Tumadi na-eji na-ere ọgwụ, Nri, na Ngosiputa Ngwa Mmeputa.
Nke gara aga: Popular Type Disc Type Jet Mill
Osote: Jet Mill WP System – Tinye na Ubi Agrochemical
Special Iji Fluidized-bed Jet Mill Na High H ...
QDF-400 WP n'ihu Production System Of Jet ...